Wepasi wepamusoro wepamusoro 10 Kutengesa uremu Kurasikirwa Powder supplement
Wepamusoro wepasi rose gumi Zvakanakisa-Kutengesa Kurera Kupera Poda yekuwedzera
/Blog/Kuonda/Wepamusoro wepasi rose gumi Zvakanakisa-Kutengesa Kurera Kupera Poda yekuwedzera
Posted on 09 / 01 / 2018 by 阿斯劳 akanyora Kuonda.
Iyo mishonga zvakare inovandudza noradrenaline chiitiko mu "nzvimbo yekudyisa" yehuropi hwemunhu, iyo hypothalamus. Iyo hypothalamus yemunhu inodzora muyero wesimba mumuviri system. Ruzivo nezvezvimwe zvitoro zvemagetsi zvinogadzirwa muiyo hypothalamus iyo inodzora kudya uye kudya. Noradrenaline kusunga uye chiitiko mu hypothalamus ine kudzikisira mhedzisiro yekuda kudya. Mishonga yakadaro inosanganisira:
Iko kusashanda kwakanangana zvakananga nedosi yemushonga wakatorwa. Sezvo chinodhaka chemushonga chichiwedzera, kugadzirwa kwesimba kunova kusinganyanyi kushanda, mwero wemagetsi unokwira (uye huwandu hwakawanda hwemafuta hwatsva) kusangana nezvinodiwa nesimba uye kuripa kusashanda. DNP ndeimwe yeakanakisa mumiririri anozivikanwa nekusunungura oxidative phosphorylation. Phosphorylation yeADP neATP synthase inowana “kusabatanidzwa kana kubviswa kubva mukusanganiswa.
Mushure mekupedza maawa mazhinji tichitsvaga nezvekudzora uremu zvinodhaka, isu takakwanisa kuona mashoma e2018 World's Best-Selling Weight Loss Powder Supplements. Aya ekuremerwa kurasikirwa nehupfu zvinowedzera zvinosanganisira orlistat uremu hwekurasikirwa hupfu uye lorcaserin uremu hwekurasikirwa hupfu. Kusiyana nehurema hwekureruka zvekuwedzera zvinowanwa pane chero chitoro chezvinodhaka, iyi yekuremerwa uremu mishonga iyo yakatemwa nevezvehunyanzvi vakapfuura makore ekuyedzwa kuti vawane chitambi chekubvumidzwa kubva kuDFA nedzimwe nzvimbo dzinoverengeka. Isu tinokurudzira zvikuru kuti uedze iyi mishonga nekuti yakaratidza kuti haina kungoshanda chete asi zvakare yakachengeteka kushandisa.
I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika we2021	I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika weArmodafinil